Jerry Varghese Iraisam-pirenena momba ny asa sy ny fandraisana mpiasa
Torolàlana ho an'ny asa otomativa any Dubai
Desambra 31, 2017
navoakan'ny Dubai City Company at Desambra 29, 2017
Jerry Varghese International Careers Solution ho an'ny mpikaroka amin'ny asa eran-tany. Expats avy any India manampy ny olona hahazo asa.
Jobs in Dubai miaraka amin'ny Jerry Varghese International Careers. Ny orinasa dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ireo mpampiasa mpiasa. Raha ny zava-misy, Jerry Varghese dia vondrona fandraisana mpiasa voalohany vahaolana fandraisana an-tsaina ho an'ny expats. Niorina tamin'ny toerana ambony indrindra. I Jerry Varghese no mpanolo-tsaina tsara indrindra sy ambony indrindra. Amin'ny lafiny iray, ny orinasa dia mamatsy fatratra sy feno serivisy fanarenana olona ao amin'ny Golfa.
Amin'ny fotoana iray ampiasanao ny Jerry Varghese International Careers. Mazava ho azy ireo manome ny fametrahana lafo vidy amin'ny raharaham-barotra ao Dubai. Teboka iray lehibe iray azonao atao ny miasa dia ny indostria ary asan'ny governemanta. Ny zavatra voalohany tokony tadidio io orinasa io fananana mafy orina ao amin'ny Moyen Orient ary niasa nandritra ny taona 30 mahery izy ireo. Amin'ny lafiny tsara rehefa manao izany ianao asa mitady miaraka amin'ity orinasa fandraisana mpiasa ity. Afaka manantena ianao serivisy asa sy asa fanompoana iraisam-pirenena. Tsy ao amin'ny orinasan'ny Golfa ihany fa amin'ny sehatra manerantany ihany.
Ho an'ireo taona 25 farany, i Jerry Varghese dia nanampy ireo mpikatsaka asa. Amin'ny ankapobeny dia miresaka manerana izao tontolo izao ary misy ihany koa i India sy Pakistan. Ny porofo manamafy indrindra fa ny orinasa dia iray amin'ireo tsara indrindra. Ny fanatrehany ny fitrandrahana manerantany ve ny fampiasana azy ireo? tsenan'ny fahaiza-mitsinjo any Moyen-Orient.
Noho izany antony izany, dia miezaka hampahafantatra ny orinasanao aminao izahay. Araka ny asehon'ny etsy ambony ny fahalalahan'ny orinasa ny tsenan'ny fandraisana mpiasa. Na ahoana na ahoana, safidy tsara ny fitadiavana azy ireo. Isaky ny vaovao mpitady karama miatrika olana amin'ny alàlan'ny fitadiavana asa ao amin'ny GCC.
Ny asa ho an'i Jerry Varghese Dubai
Saingy rehefa mandeha ny fotoana dia miasa akaiky io orinasa io. Miaraka amin'ny mpampiasa sy ny mpikirakira hanome anao tsara indrindra manakarama serivisy ho an'ny tsenan'ny asa iraisam-pirenena. Ny natao-milambo fanolorana vahaolana ho an'ny kandidà tsirairay mahatonga ity orinasa ity ho mahafinaritra ao amin'ny Facebook sy LinkedIn. Recruiter in Dubai, United Arab Emirates manampy ireo orinasa manokana hitantana ny filan'izy ireo fandraisana mpiasa.
Jerry Varghese miasa ao amin'ny indostrian'ny 11. Indraindray dia orinasan'ity orinasa ity Mpiasa an-tany Dubai, ny fanakaràn'ny mpanjifa azy dia manana olona maro samihafa. Vaovao avy amin'ny fitaky ny tsena amin'ny asa iraisam-pirenena, mazava ho azy, miankina amin'ny traikefa amin'ny kandidà. Mandritra ny ankamaroan'ny fanamby mahita asa any Dubai. Ataovy ity orinasa ity ny fampiasana tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Jerry Varghese dia miasa maimaim-poana amin'ny asa momba ny asa ary afaka mampiasa azy ireo amin'ny fotoana rehetra tianao. Amin'izao fotoana izao, orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany mifototra amin'ny firenena GCC ny fanendrena. Saingy mety hahita toerana banga liana ianao amin'ny tranokalany. Rehefa ela ny ela dia ekena maso manampy ny mpikaroka asa maro any Dubai. Orinasa miasa amin'ny mpanjifa betsaka sy mazava ho azy amin'ireo kandida maro be.
Miasa tsara asa an-asa toy ny taxi ao Dubai lasibatra ho an'ny mpitady asa. Ka miankina amin'ny orinasa mitantana soatoavina tsara izany. Noho ny firoboroboana ny fanoloran-tena, ary ny fahaiza-manao amin'ny fanaovana asa tsena dia tena manao ity orinasam-bola ity tsara indrindra ho an'ny olona ao Dubai City.
Jerry Varghese dia tokony ho mpiara-miasa
Hatramin'izao fotoana izao, Jerry Varghese miasa amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ary mahomby manome tsokajiny ho an'ny 30 taona. Mandritra izany fotoana izany koa, manana orinasam-pifandraisana ao India ity orinasa ity.
Ao amin'ny orinasa voalohany izay manome vahaolana momba ny fandraisana mpiasa sy mpiasa. Miteny amin'ny ankapobeny Indiana te hanomboka hiasa any Dubai. Miovaova mihoatra ny mpanjifa iraisam-pirenena 500 mitady hameno ny filàn'ny olombelona. Vetivety rehefa niatra ianao dia niely ny teny momba ny banga iraisam-pirenena sy ny mahazo asa haingana.
Ny orinasan'ny Golfa izay mihoatra ny nantenain'ny mpampiasa. Ka mila mitady anjara sahaza ianao ary mpanolo-tsaina momba ny famoahana ny asa iraisam-pirenena. Ka amin'ny farany, rehefa ampiharina amin'i Jerry ny CV dia homena manontolo tolotra asa any Dubai 2018.
Ity orinasa mpikirakira ity antsoina hoe Jerry Varghese. Tamin'ny ankapobeny dia nankalazaina nandritra ny 30 miampy taona maro serivisy fandraisana asa soa aman-tsara. Ankoatra izany, orinasa iray manolotra matihanina fikarohana asa ho an'i Arabia Saodita sy ny vahaolana amin'ny fandraisana mpiasa. Manampy ny olona izy ireo avy any India ny fomba hahazoan'ny visa.
Miaraka amin'ity orinasa ity, afaka miasa miaraka amin'ny 400 plus plus organisations ianao isam-bolana. Io orinasa io dia niely nanerana ny sehatry ny indostria 11 ao amin'ny Ho an'ny Golf izay ahafahanao mandanjalanja ny tenanao.
Jobs in Dubai City mandeha mihoatra ny recruiter profile, io orinasa io dia mitana ny asan'ny mpanolo-tsaina eo amin'ny tsenan'ny asa United Arab. Ity orinasa ity dia manome kompana feno sy mahomby fandraisana mpiasa serivisy ho an'ny mpandraharaha any amin'ny tsenan'ny asa any Gulf.
Indostria vaovao sy sekta vaovao. Ny ekipanay manam-pahaizana dia manolo-tena amin'ny famolavolana vahaolana amin'ny vahaolana amin'ny fampiasana ny fahalalantsika fananganana recruiting rafitra, loharano & haitao teknolojia hahatratra ny mpanjifanay raharaham-barotra tanjona.
Ny orinasa any Dubai
Amin'ny maha orinasa azy dia mino ny olona manana fahefana i Jerry Varghese International Careers. Indrindra ho an'ny fikambanana any Moyen-Orient. Ity orinasam-pitantanana ity dia mahatsapa fa ny mpiasa no fananana sarobidy indrindra amin'ny orin'asa rehetra. Miasa any Moyen Orient no nofinofisin'ny ankamaroan'ny miely eran'izao tontolo izao.
Ireo orinasa mpahazo an-tsokosoko dia mila ny expasriates. Miezaka hatrany ny orinasanay voafidy sy manampy ny hafa. Izany no antony anoratantsika lahatsoratra momba ity orinasa ity. Ny mpitantana dia nitazona sy nitazona raharaham-barotra iraisam-pirenena tao GCC. Jerry Varghese mampiasa ny loharano tsara indrindra ho an'ny fikambanana.
Ity orinasa ity dia miasa tsara satria mandany mihoatra ny am-polo taona any amin'ny indostria HR matihanina. Ny famoahana ity orinasa ity dia naka mihoatra ny taona 31. Indrindra indrindra fa any India ka hatrany amin'ny Golfa dia namorona fikambanana iraisam-pirenena ny orinasa. Amin'ny ankapobeny dia manohana ny orinasa matihanina. Ary koa ny fisafidianana ny vola manan-danja indrindra fanangonam-bokatra any amin'ny GCC. Jerry Varghese International Careers dia orinasa tsara ho an'ny Indian ireo mpiasa vahiny.
Asa any amin'ny Golfa
Talohan'ny na dia ity orinasa ity aza mihazona fandraisana an-tanana. Ny fanombohana dia mila fotodrafitrasa tsara any India. Ny orinasa nanomboka tamin'ny matihanina mahery vaika teo amin'ny orinasa tany Dubai. Nanomboka tamin'ny rafitra fampiasam-bola mahomby sy teknolojia manerantany amin'ny teny indiana izy ireo.
Afaka miresaka amin'izy ireo ianao amin'ny finday ho mpiara-miasa amin'ny orinasa sy kandidà. Ity no fomba tsara indrindra amin'ny fizotry ny fanodinana. Manokana indrindra ny fampiasam-bola tsy tapaka sy ny fanavaozana ny loharanon-trano hividianana mpiasa any India Avy eo ny fifindrana any amin'ny firenena any an-dranomasina any. Ny porofo manamafy indrindra indrindra an'izany tokony hanomboka hifandray amin'ity orinasa ity ianao no mpiasa matihanina. Satria izy rehetra dia natokana hanompo servisy any amin'ny firenena maro. Ohatra, azonao atao mahita asa manerana Arabia Saodita in miasa amin'ny sehatry ny banky.
Ny karaman'i Jerry Varghese International dia sarobidy Indian clients and candidates. Ity orinasa mpikirakira ity dia manampy azy ireo hameno ny fepetra takiany tsirairay avy Orinasa any an-tsena. Indrindra avy amin'ny Emirà Arabo Mitambatra ary Qatar. Amin'ny lafiny iray kosa dia mila mamono tanjona ianao. Amin'ny lafiny tsara, afaka mahazo fotoana fohy sy maharitra ianao pahaizana momba ny asa any Golfa.
Ny asa fitadiavan'i Jerry Varghese
Jerry Varghese's fandraisana mpiasa ho an'ny MBA miparitaka eraky ny tsenam-piasana samihafa ireo mpianatra. Ny fisian'ny tsenan'ny mpikarama any India. Amin'ny ankapobeny, miakatra manerana ny firenena hafa toa an'i Kuwait sy Oman. Jerry Varghese fandraisana an-tànana miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fotoana feno any Gulf. Ny fitantanana ao amin'ity orinasa ity dia manaitra ny ezaka. Indrindra ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny consultant management international. Ity fitantanana ity dia nampidi-bola mafy hananganana fifandraisana matanjaka miaraka amin'ny hafa ary manangana fotodrafitrasa hentitra any India.
The toeram-pivarotana no fototry ny orin'asa rehetra. Fa ity orinasa orinasa ity amin'ny hevitra avo be. Ary fanampin'izany, mahavita manohana kandida vaovao izy ireo. Avy amin'ny marketing varotra any India. Satria miasa mafy izy ireo hahatrarana ambaratonga avo lenta amin'ny famandrihana hentitra fitantanana matanjaka.
Na izany aza, raha ianao no iray amin'ny mpiasa avy any Afrika Atsimo Azonao atao koa ny mipetraka. Satria ny orinasanay manampahefana manerana izao tontolo izao. Ohatra, Nafahana avy any Filipina napetraka ihany koa Emira Arabo Mitambatra. Miasa amin'ny orinasa any India. Amin'ny ankapobeny dia manana toerana tsara izy ireo. Ohatra, ny biraon'ny sampana no mameno ny ampahany lehibe amin'ny India avy any Delhi mankany Trivandrum.
Ny orinasa tsara indrindra hahitana asa
Azonao atao anefa ny mipetraka amin'ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra ho an'ny mpiasa Dubai. Ny orinasa manampy ny mpampianatra hahita asa ary ny mpitantana mba hahita asa mendrika.
Ny biraon'ny orinasa sy ny tetikasa dia samy eo amin'ny vola ara-bola ao amin'ny firenena, Mumbai. Ny fanatrehan'ny Pan-India dia ahafahantsika mifandray amin'ny lava-pianakaviana lehibe iray ary mahazo ny fifangaroan'ny kandidà ho an'ny mpanjifantsika amin'ny orinasa fiara. Amin'ny lafiny tsara, i Jerry Varghese dia mpiara-miasa amin'ny birao maromaro ary ao izy ireo firenena maro any Moyen-Orient ho an'ny asa.
Ianao dia afaka mahita asa any amin'ny orinasam-panjakana any UAE & Koety koa any Qatar. Noho ny vahaolana naroson'ny Jerry Varghese International Career. Azo antoka fa manampy ny hafa hihaona amin'ny fitakiana faneriterena avy any Inde mankany Emirà Arabo Mitambatra. Ary ny orinasa dia miasa foana amin'ny fanomezana serivisy mpanjifa tsara. Amin'ny ankapobeny, manampy ny mpanjifa vaovao manakarama misimisy kokoa ny mahomby.
Ity orinasa ity dia afaka manampy anao hahita izany hotely jobs job. Ity birao mpiara-miasa amin'ny orinasa voamariky irony ity dia manerana an'izao tontolo izao amin'ny toerana stratejika. Rehefa manomboka miasa amin'ity orinasa ity izy ireo. Ireo biraon'ny mpiara-miasa manomboka misolo tena ny faritra iray. Iray amin'ireo ohatra i UAE sy Koety satria manodidina ny toerana rehetra izy io.
Azo antoka fa ny orinasa manampy ireo mpifindra monina amin'ny fahazoana tolotra asa. Orinasa isam-bolana manompo ny habetsahan'ny mpilatsaka hofidina. Miezaka mifanandrify amin'ny traikefa mifototra amin'ny traikefany tsirairay. Eo koa ny famindrana azy ireo any amin'ny faritra voafidy. Mandritra izany fotoana izany miara miasa amin'ny expats iraisam-pirenena nahafahan'ity orinasa ity nikaroka mpirotsaka hofidina manerana izao tontolo izao. Ary mametraka azy amin'ny toeran'ny GCC anay. Amin'ny lafiny iray dia azafady mitsidika ny mpitsidika anay Torolàlana ho an'ny expats any amin'ny firenena gulf vondrona asa.
Indiana ary Pakistane expats mitady asa isan'andro. Ao an-tsaina, ity isika manampy ireo mpitady asa any UAE. Misy vondrona maromaro eo amin'ny tranokalanay izay misy ny expats eo an-toerana manolotra asa. Ary ny olona avy any Afrika Atsimo sy India dia nandefa resume amin'ny fanantenana fa hahita asa. Noho izany dia manentana mafy ireo mpilatsaka hofidina vaovao ny ekipan'ny mpitantana mba hametraka fanazavana momba ny vondrona misy anay. Tsidiho ny tranonkala Jerry Varghese International Careers.
Amin'ny ankapobeny, alohan'ny mipetraka amin'ny tranokalanay. Mazava ho azy fa tokony hijery ny orinasa ambony momba ny mpikarama koa isika for expats. Asa vaovao mikaroka motera Careerjet ary Tranonkala monster for expats. Tena mendrika hampidirina amin'ny CV anao izy ireo. Izy ireo dia mety tsara ho anao raha jerena ny fampiharana haingana.
Te-hahita a Job in Dubai? Na dia marina aza izany dia afaka manampy anao hanomboka asa vaovao ao The Emira Arabo Mitambatra!
Afeno ny famerenana ho an'ny fastest Tanàna mitombo eto an-tany! - Dubai City
Dubai City Company manome tsara izao mpitarika ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hanampy fampahalalana ho an'ny fiteny tsirairay ho anay Dubai mitsotra. Noho izany, amin'izao fahatsapana izao, afaka mahazo torolalana, toro-hevitra sy asa any Emirà Arabo mitambatra amin'ny fiteninao manokana ianao.